Ampidino PDF Encrypt ho an'ny Windows
Ampidino PDF Encrypt
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (5.34 MB)
Ampidino PDF Encrypt,
Ny programa PDF Encrypt dia iray aminireo programa maimaim-poana sy mora ampiasaina azonao ampiasaina hiarovana ireo rakitra PDF anao. Izy io dia manohana ny RC4 40-bit, ny RC4 128-bit, ny AES 128-bit ary ny AES 256-bit, mba hahafahanao miaro ireo rakitrao PDF aminny alàlanny fomba encoding tianao.
Noho ny fiarovana PDF, azonao atao ny misoroka tanteraka ny hafa izay mandray ny antontan-taratasinao tsy hanonta, hanao kopia ary hanao zavatra maro hafa. Noho izany, na dia voasambotra tsy misy alalana aza ireo antontan-taratasinao, dia tsy misy hetsika hafa azo raisina ankoatry ny famakiana azy ireo. Raha irinao dia azonao atao koa ny mametraka teny miafina ao aminny antontan-taratasinao, aminizay dia azo antoka fa tsy azo vakiana aminny fomba rehetra izany raha tsy hoe misy ny teny miafina.
Ho voaro hatrany ny antontan-taratasinao noho ny programa izay tsy mametraka mpamily ary manohana sy manidina ny fanohanana ary ny fanodinana batch.
PDF Encrypt Specs
Haben'ny rakitra: 5.34 MB